फोटो समाचार – Page 293 – Etajakhabar
दबाब र स्वार्थमा संविधान संशोधन हुँदैन : ओली
काठमाडौं – पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कसैको दबाब र स्वार्थमा संविधान संशोधन हुन नसक्ने बताएका छन् । दुई साता लामो उपचारपछि सोमबार थाइल्याण्डबाट फर्किएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनको औचित्य प्रष्ट पार्न सरकारलाई आग्रह गरे । ‘कुनै दबाब, बहकाउमा कुनै पनि हिसावमा देशको अहित हुने गरी लोकतन्त्रलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी कसैको स्वार्थ अर्घेल्याईं स...
रिहानाको उत्ताउलो पहिरन, तस्विर भयो भाइरल
एजेन्सी । चर्चित गायिका रिहाना आफ्नो उत्ताउलो पहरिनका कारण बेलाबेलामा चर्चामा आउने गरेकी छिन् । पछिल्लो समय प्रेमीका कारण सामाचारमा छाएकी उनी फेरी आफ्नो भड्कीलो अवतारका कारण चर्चामा छिन् । फिलाडेलफियामा सांगीतिक टुरमा रहेकी यि २८ बर्षकी गायिकाले पछिल्लो भाग देखाउनका लागि पहिरन पनि त्यस्तै किसिमको लगाएका कारण उनको तस्विर सामाजिक संजालमा भाइरल बनिरहेको छ । जसले गर्दा उनको पछिल्लो भाग खुला...
मलाइकाको स्टाइलिस्ट अवतार, आखिर केका लागी ?
एजेन्सी । बलीउड आइटम गर्ल तथा अभिनेत्री मलाइका अरोराको रहनसहनमा पछिल्लो समय केही बदलाव देखिएको छ । पति अरबाज खानसँग डिर्भोस भएलगत्तैबाट उनी भिन्न गेटअपमा देखि थालेकी छन् । उनको गेटअप देख्दा लाग्छ उनी स्वतन्त्र बन्न चाहिरहेकी छिन् । हालै आयोजना गरिएको बडी विल्डर बाबा दिवानको एक पार्टीमा पुगेकी उनको अवतार हट थियो । हट यस अर्थमा कि उनी रफ गेटअपमा साथमा उनी स्टाइलिस्ट शैलीमा देखिएकी थिइन् । जस...
अब मोबाइल डाटाबाटै दुई जिबीको फिल्म ४४ सेकेण्डमै डाउनलोड
भदौ २० गते- प्रविधिको विस्तारसँगै इन्टनेट स्पिडमा पछिल्लो समय निकै सुधार हुँदै गैरहेको छ । यसैक्रममा फिनल्याण्डको एक मोबाइल नेटवर्क कम्पनीले विश्वको सबैभन्दा तिव्र गतिको इन्टरनेट आफूले उपलब्ध गराएको दावी गरेको छ । फोर जी मोबाइल इन्टरनेटमार्फत् उसले दुई जिबीको फिल्म मात्रै ४४ सेकेण्डमा डाउनलोड हुने दावी गरेको होे । परिक्षणका क्रममा मोबाइल इन्टरनेटमा १.९ गिगाबाइट प्रति सेकेण्ड इन्टरनेट स्पीड रहेको...
छाडा बन्दै करिना, देखाइन् यस्तो अश्लिल रुप
एजेन्सी । पछिल्लो समय आफ्नो छवीलाई हट देखाउँदै आएकी भेनेजुएलाकी नायीका करिना डेरिजेनले फेरी आफ्ना हट तस्विरहरु सामाजिक संजालमा छरपष्ट पारेकी छिन् । टेलिभिजन स्टार समेत रहेकी करिनाले आफ्नो बिदा मनाउने क्रममा मायामी बीचमा मस्ति गरिरहेको अवस्थाका तस्विरहरु ट्विटरमार्फत सेयर गर्दै सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा चर्चा बटुलेकी छिन् । उनका कामुक तस्विरहरु अहिले भाइरल बनीरहेका छन् ।
मिस्टर माछापुच्छ्रेको उपाधि विनोदलाई
पोखरा। कास्की जिल्ला शारीरिक सुगठन तथा फिट्नेश सङ्घ पोखराद्वारा आयोजित पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीयस्तरको खुल्ला शारीरिक सुगठन प्रतियोगिताको ७५ केजीभन्दा माथि तौलका हेभिवेटमा पाल्पाका विनोद बज्राचार्य मिस्टर माछापुच्छ्रे च्याम्पियन भएका छन् । प्रतियोगतामा कपिलवस्तुका सुरेन्द्रप्रसाद बर्मा, कास्कीका कमल भण्डारी र मनोज केसी तथा रुपन्देहीका ताराबहादुर थापा र कृष्णप्रसाद श्रेष्ठलाई पछि पार्दै विनोदले उपाध...
४७ वर्षअघि चन्द्रमामा पाइला टेकेका जीवित अन्तरिक्षयात्री ८७ वर्षीय बज अल्ड्रिन आज नेपाल आउँदै
विराटनगर, भदौ २० - ४७ वर्षअघि चन्द्रमामा पाइला टेकेका जीवित अन्तरिक्षयात्री ८७ वर्षीय बज अल्ड्रिन सोमबार काठमाडौं आउँदै छन्। उनले मंगलबार सुनसरीको अमाहीबेल्हा सीतागन्जस्थित एभरेस्ट साइन्स सेन्टरको अवलोकन गर्दै छन्। अल्ड्रिन नेतृत्वको ६ सदस्यीय टोली पाँच दिन नेपालमा रहने खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ। मंगल ग्रहमा बस्ती बसाउने योजनाका अध्यक्षसमेत रहेका अल्ड्रिनका छोरा डा. एन्ड्रयु अल्ड्रिन, न...
सिरियाबारे सहमति नहुनुमा रसिया दोषीः अमेरिका
चीन, १९ भदौ । अमेरिकाले सिरिया द्वन्द्वबारे सहमतिमा पुग्नज नसक्नुमा रसिया दोषी रहेको आइतबार बताएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले यसअघि सिुरिया द्वन्द्व अन्त्यका लगि सहमति गर्न रसिया र अमेरिका चौबिसै घण्टा लागिपरेको बताउनुभएको थियो । विश्व अर्थतन्त्रका प्रमुख बिस प्रमुख अर्थतन्त्रकाो समूह ‘जि–ट्वान्टी’ को शिखर सम्मेलनका क्रममा चीन आउनुभएका अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामाले भन्नुभयो, “सिरिया द्...
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा पशुपतिको दर्शन
काठमाडोँ, १९ भदौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हरितालिका तिजको अवसरमा आज साँझ पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति भण्डारी पशुपतिमा पुग्दा दर्शनका लागि लामबद्ध महिलाले हात हल्लाएर स्वागत गरेका थिए । उहाँलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सञ्चालक परिषद सदस्य एवम् कर्मचारीले मन्दिरको पश्चिमद्वारअघि स्वागत गरेका थिए । मन्दिर घुमेर राष्ट्रपति भण्डारीले पशुपतिनाथको दर्शन गर्नुभएपछि मूलभट्ट ...
मदर टेरेसालाई मरणोपरान्त सन्त उपाधि प्रदान
भ्याटिकन सिटी, १९ भदौ । भारतको कोलकत्तामा गरिव दुःखीहरुलाई सहयोग गर्ने भिक्षु मदर टेरेसालाई भ्याटिकन सिटीमा आईतवार आयोजित क्रिश्चियन समारोहमा सन्त घोषणा गरिएको छ । लाखौं धर्मालम्वी सहभागी र क्रिश्चियन धर्मगुरु पोप फ्रान्सिसले अध्यक्षता गरेको समारोहमा गौरवका साथ टेरेसालाई सन्त घोषणा गरिएको हो । टेरेसाको १९औं बार्षिकीको पुर्वसन्ध्यामा आयोजित समारोहमा धर्मगुरु फ्रान्सिसले भन्नुभयो — “सम्मानले...
हेर्न छुटेको यो भिडियो जस्ले रविलाई विवादमा ल्याइदियो, भिडियो हेरेपछि वास्तविक पाउनुहुने छ अर्कै (भिडियो)
आम्दानीको श्रोत खोज भन्नेलाई ज्ञानेन्द्र शाहीले दिए जवाफ, म ब्यापारी हुँ कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा गएर हेर्नुस् (भिडियो हेर्नुस्)
दशैंको मुखमा रविलाई थुन्न सरकारी वकिलको निवेदन, पूर्वपत्नी नेपाल आउँदै
लण्डनबाट ह्विलचेयरमा फर्किए इरफान खान
पाइलटले यसरी बचाए सात वटा हेलिकप्टरका यात्रुको ज्यान, विदेशी पर्यटक बोकेको हेलिकप्टरको आकस्मिक अवतरण
जब सुहागरातमै श्रीमतीलाइ यी युवकले गरे यस्तो अचम्मको हर्कत, श्रीमती परिन चकित !
वसपार्कस्थित एक होटलमा प्रेमी संगै बसेकी रिता जव यस्तो अवस्थामा फेला परिन….
कमलाकी आमा तत्कालिन माओवादी जनयु द्धमा यसरी होमिएकी थिइन्, उनकै अगाडी यसरी मा रिए साथी (भिडियो हेर्नुस्)